စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရလဒ်တွေပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၁၈) ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ နှုတ်ဆက်ချိန် - FOX Sports Asia
စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရလဒ်တွေပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၁၈) ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ နှုတ်ဆက်ချိန်
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းအနေနဲ့ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ချန်ပီယံဆုကို ရယူနိုင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့် ရာသီနောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေကတော့ ပြင်းထန်တဲ့ ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပုံဖော်ခဲ့ပါတယ်။
အမှတ်ပေးဇယား ထိပ်ပိုင်းမှာ ရှိနေခဲ့တဲ့အသင်းတွေအနေနဲ့ လာမယ့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်အတွက် အကြိတ်အနယ် ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ရသလို တန်းဆင်းဇုံက အသင်းတွေအနေနဲ့လည်း လာမယ့်ရာသီ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ ဆက်လက်တင်ကျန်နိုင်ဖို့ အပြင်းအထန်ကြိုးစားခဲ့ရပါတယ်။
ယခုနှစ် ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပြိုင်ပွဲရဲ့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ် (၉) ပွဲလုံးကို တစ်ချိန်တည်း ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဘိုင်ယန်အသင်းရဲ့ နည်းပြဟေးနက်အနေနဲ့လည်း အသင်းပရိသတ်တွေရှေ့မှာ ရလဒ်ကောင်း ရယူနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်တွေမှာ ဘယ်လိုဖြစ်ရပ်တွေ ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုတာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။
စတုဂတ်အသင်းရဲ့ ရပ်တန့်မှုကိုခံခဲ့ရတဲ့ ချန်ပီယံ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်
အမှတ်ပေးချန်ပီယံဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့ အသိက ဘိုင်ယန်အသင်းကို စတုဂတ်အသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အဓိက ဒုက္ခပေးခဲ့ဖွယ်ရှိပါတယ်။နည်းပြ ဟေးနက်ရဲ့ နှုတ်ဆက်ပွဲစဉ်လည်း ဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့် ဘိုင်ယန်အသင်း ယခင်က ကစားခဲ့တဲ့ ပုံစံတွေထက် ပိုကောင်းတဲ့ ပုံစံကို မြင်တွေ့ရမယ်လို့ အားလုံးက ထင်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
End of an era. 😢#DankeJupp #MiaSanMeister pic.twitter.com/4PmsmgJVDP
ဒါပေမယ့် စတုဂတ်အသင်းကို အိမ်ကွင်းပရိသတ်ရှေ့မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်း (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ့အရေးနိမ့်ခဲ့တာက အားလုံးကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ်။အနည်းဆုံးတော့ ဘိုင်ယန်အသင်း နည်းပြ ဟေးနက်ကို ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ချန်ပီယံဆုနဲ့ နှစ်သိမ့်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပဲ ဆိုရပါမယ်။
ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ (၆) ကြိမ်ဆက် ချန်ပီယံဆုကို သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဘိုင်ယန်အသင်း ဒီအရှုံးရလဒ်ကို မကြာခင်မေ့ပျောက်သွားနိုင်မှာပါ။
ဒေါ့မွန်အသင်းကို အနိုင်ယူပြီး ချန်ပီယံလိဂ် ၀င်ခွင့်ရယူနိုင်ခဲ့တဲ့ ဟော့ဖန်ဟိမ်း
ဟော့ဖန်ဟိမ်းအသင်းကတော့ ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ ကစားတဲ့နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရရှိမှ လာမယ့်ရာသီ ချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲသွားရောက်ခွင့် လက်မှတ်ရရှိမယ်ဆိုတာကို ကောင်းကောင်းသိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ဒါ့ကြောင့် နည်းပြ နာဂျယ်စ်မန်းအနေနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ စတိုဂါ ရဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းကို အနိုင်ယူကျော်ဖြတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
So, so geil! 💙#EinTeamEinWegEinmalig pic.twitter.com/zAcM546FNq
အရှုံးရလဒ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဒေါ့မွန်အသင်းအတွက် စိုးရိမ်စရာ အခြေအနေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ဆုံး ပွဲစဉ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် ပြိုင်ပွဲကို ၀င်ရောက်ခွင့်အတွက် အနီးကပ်ဆုံးပြိုင်ဘက် လေဗာကူဆင်အသင်း အနိုင်ရရှိခဲ့တာက ဒေါ့မွန်အသင်းနဲ့ ရမှတ်တူညီခဲ့ပြီး ဂိုးကွာခြားချက်ကြောင့်သာ ဒေါ့မွန်အသင်း ကံကောင်းခဲ့တာပါ။
လေဗာကူဆင်အသင်းအတွက်ကတော့ နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ဒေါ့မွန်အသင်းကို ကျော်ဖြတ်ပြီး ချန်ပီယံလိဂ်ဝင်ခွင့်တစ်နေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိတာက ကံဆိုးခဲ့တယ်လို့ပဲဆိုရမှာပါ။ဒါ့အပြင် ဒီရလဒ်ဟာ ဒေါ့မွန်အသင်း နည်းပြစတိုဂါအတွက်တော့ လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ ရလဒ်တစ်ခုလို့ ဆိုနိုင်ပြီး ဒီပွဲစဉ်အပြိးမှာ စတိုဂါ နည်းပြရာထူးကနေ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့တဲ့အထိ ဆိုးရွားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရလဒ်ပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ လေဗာကူဆင်
လေဗာကူဆင်အသင်းကတော့ နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ အကောင်းဆုံး ဇာတ်ညွှန်းကိုရေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ။
ဒေါ့မွန်အသင်း အရေးနိမ့်ခဲ့စဉ်မှာ ချန်ပီယံလိဂ် မျှော်လင့်ချက်အတွက် လေဗာကူဆင်အသင်း အကောင်းဆုံး ရှေ့ဆက်နိုင်ခဲ့ပြီး အိမ်ကွင်းမှာ အစောဆုံး ရရှိခဲ့တဲ့ပင်နယ်တီကို လေဗာကူဆင်အသင်း လွဲချော်ခဲ့ပေမယ့် ဟန်နိုဗာအသင်းကို (၃) ဂိုးပြတ်နဲ့ဦးဆောင်ကစားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လေဗာကူဆင်အသင်း (၄) ဂိုးလောက် ရရှိခဲ့သင့်ပေမယ့် ပွဲချိန် (၅) မိနစ်မှာ ရရှိခဲ့တဲ့ ပင်နယ်တီကန်သွင်းရာမှာ ဂိုးဝင်ခဲ့ပေမယ့် ကွင်းလယ်ဒိုင်လူကြီးက VAR အဆုံးအဖြတ်နဲ့ ပယ်ချခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
Looks like we'll just have to win the Europa League next season…#B04H96 | 3:2 pic.twitter.com/ReIXD4lard
ဒီငြင်းပယ်ခံရမှုဟာ လေဗာကူဆင်အသင်းရဲ့ မျှော်လင့်ချက်တွေကို ရေစုန်မျောစေခဲ့တယ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပြီး ပြိုင်ဘက်အသင်းကို သွင်းဂိုးတွေခွင့်ပြုခဲ့ရတာက ချန်ပီယံလိဂ် အိပ်မက်ကို ပျက်စီးစေခဲ့ပါတယ်။
အနိုင်ရလဒ် ရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်ကို လွဲချော်ခဲ့ရတဲ့ အာဘီလိုက်ပ်ဇစ်
ချန်ပီယံလိဂ် မျှော်လင့်ချက် ကောက်ရိုးတစ်မျှင်ကို ဆုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့ လိုက်ပ်ဇစ်အသင်းကတော့ ရလဒ်ကောင်းရယူနိုင်ခဲ့ပေမယ့် အိပ်မက်တွေ အကောင်အထည်ပေါ်လာဖို့အတွက် ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ်ကို စောင့်ကြည့်ခဲ့ရပါတယ်။
Nothing would be possible without our fans ❤️ Here's to you, the 12th man! 👏🔴⚪ #DieRotenBullen pic.twitter.com/7M99uhCBp7
ဒါပေမယ့် ဟော့ဖန်ဟိမ်းအသင်းနဲ့ လေဗာကူဆင်အသင်းတို့ အသီးသီးရလဒ်ကောင်းခဲ့တာကြောင့် ဟာသာဘာလင်အသင်းကို (၆) ဂိုး (၂) ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ လိုပ်ဇစ်အသင်း အဆင့် (၆) နေရာကိုသာ ရရှိခဲ့ပါတယ်။
အသင်းသမိုင်းကြောင်းတစ်လျောက် ပထမဆုံး တန်ုးဆင်းသွားခဲ့ရတဲ့ ဟမ်းဘတ်
ဒီနေ့ရက်တွေက ဟမ်းဘတ်အသင်း ပရိသတ်တွေအတွက်တော့ မေ့လို့မရနိုင်တဲ့ နေ့ရက်တွေထဲက တစ်ခုဖြစ်လာမှာပါ။ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ ပြိုင်ပွဲမှာ သမိုင်းကြောင်းကောင်းခဲ့တဲ့ ဟမ်းဘတ်အသင်း အသင်းသမိုင်းကြောင်းတစ်လျောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲကို နှုတ်ဆက်ခဲ့ရပါတယ်။
မိုချန်ဂလာဘတ်အသင်းကို (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ့ ဟမ်းဘတ်အသင်းအနိုင်ရရှိခဲ့ပေမယ့် ၀ုလ်ဘတ်အသင်းက ကိုလုံးအသင်းကို (၄) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် အခုလို ပြိုင်ပွဲကို လက်ပြခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ အသင်းရဲ့ တန်းဆင်းခဲ့တဲ့ ဖြစ်ရပ်အပေါ်မှာ ကျေနပ်နိုင်ခြင်းမရှိပဲ ပွဲစဉ်ပြီးဆုံးချိန်မှာတော့ ဒေါသထွက်တဲ့ အမူအရာတွေကွင်းအပြည့် ပြသခဲ့ပြီး အဝေးကွင်းမှာ လာရောက် ကြည့်ရှုခဲ့တဲ့ ဂလာဘတ်အသင်း ပရိသတ်တွေအနေနဲ့လည်း ဟမ်းဘတ်အသင်းရဲ့ ကျဆုံးမှုကို ကူညီနိုင်ခဲ့ခြင်း မရှိခဲ့ပါဘူး။
ကိုယ်ပိုင် ရှင်သန်မှုကို ဖန်တီးနိုင်ခဲ့တဲ့ ၀ုလ်ဘတ်
၀ုလ်ဘတ်အသင်း နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရလဒ် ရယူနိုင်မယ်ဆိုရင် အဆင့် (၁၆) နေရာကို ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပြိုင်ပွဲမှာ ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့ Play off ကစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်လို့ နိုင်ပွဲတစ်ပွဲရရှိအောင် ဖန်တီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
နည်းပြ ဘရူနို လက်ဘာဒီယာ ရဲ့ ၀ုလ်ဘတ်အသင်းကတော့ တန်းဆင်းဖို့ သေချာနေခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ ကိုလုံးအသင်းကို မျှော်မှန်းထားတဲ့အတိုင်း အနိုင်ယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဘွန်ဒက်လီဂါ ရှင်သန်ရေး အိပ်မက်ကို ဆက်မက်ခဲ့ပါတယ်။
တန်းဆင်းဇုံကနေ ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ ဖရိုင်းဘတ်
ဖရိုင်းဘတ်အသင်းကတော့ အိမ်ကွင်း Schwarzwald-Stadion မှာ အော့စ်ဘတ်အသင်းကို (၂) ဂိုးပြတ်နဲ့ အနိုင်ယူပြီး ဘွန်ဒက်စ်လီဂါမှာ ဆက်လက်တင်ကျန်ခဲ့တာကြောင့် အောင်ပွဲခံခဲ့ပါတယ်။
SO sieht Freude über den KLASSENERHALT aus 💪🏼🔴⚪️ #SCF pic.twitter.com/zSZImJyva7
— SC Freiburg (@scfreiburg) May 12, 2018
အသင်းနည်းပြ ၊ ကစားသမားတွေ နဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ ယုံကြည်ချက်တွေက အသင်းရဲ့ရလဒ်အပေါ်မှာ သက်ရောက်ခဲ့ပြီး အောက်ဆုံး အသင်း (၃) သင်းနေရာကနေ ဖရုင်းဘတ်အသင်း ရုန်းထွက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ထိုက်တန်တဲ့ ခြေစွမ်းပြသခဲ့တဲ့ ရှော်ကေး
ရှော်ကေးအသင်းကတော့ ဖရန့်ဖတ်အသင်းနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်မှာ (၁) ဂိုးဂိုးမရှိနဲ့အနိုင်ယူပြီး တတိယနေရာက ဟော့ဖန်ဟိမ်းအသင်းကို ရမှတ် (၈) မှတ်ဖြတ်ပြီး ဒုတိယနေရာကို ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ဖရန့်ဖတ်အသင်းကတော့ နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ (၅) ပွဲမှာ (၄) ပွဲအထိအရေးနိမ့်ခဲ့ပြီး ဒီအရှုံးရလဒ်တွေက လာမယ့်ရာသီ ဥရောပ ၀င်ခွင့်ပြင်ပကို ရောက်ရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဖရန့်ဖတ်အသင်းရဲ့ နည်းပြဖြစ်သူ ကိုဗက် လာမယ့်ရာသီမှာ ဘိုင်ယန်အသင်းကို ကိုင်တွယ်မယ့် သတင်းတွေက အသင်းရဲ့ ရလဒ်အပေါ်မှာ လှုပ်ခတ်ခဲ့ဟန်ရှိနေပါတယ်။
မိန့်ဇ်အသင်းကတော့ အိမ်ကွင်းမှာ ၀ါဒါဘရီမင်အသင်းကို နိုင်ပွဲရယူနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ပေမယ့် ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်မှာ ဒေါ့မွန်အသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ရလဒ်ပိုင်းက အသင်းရဲ့ ရှင်သန်မှုမှာ အဓိက ကျခဲ့ပါတယ်။
ဘရီမင်အသင်းကတော့ မိန့်ဇ်အသင်းကို အဝေးကွင်းမှာ (၂) ဂိုး (၁) ဂိုးနဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာကြောင့် အမှတ်ပေးဇယား အဆင့် (၁၁) နေရာမှာ ရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
Home FOX Sports မြန်မာ ဘောလုံး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ရလဒ်တွေပေးစွမ်းခဲ့တဲ့ (၂၀၁၇-၁၈) ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ နှုတ်ဆက်ချိန်